काठमाडौं उपत्यकामा वर्षा, कस्तो रहला देशभरको मौसम ? – Makalukhabar.com
काठमाडौं उपत्यकामा वर्षा, कस्तो रहला देशभरको मौसम ?
२०७७ वैशाख २ गते ६:२२
वैशाख २, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकासहित देशका केहि स्थानमा पानी परेको छ । देशमा स्थानीय तथा पश्विमी वायुको समेत प्रभाव रहेकाले मौसम बदली भएको हो ।
जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार उपत्यकासहित देशका मध्य पहाडी भू-भागमा हल्का बर्षा भइरहेको हो । दिउँसो देशभरको मौसम बदली रहने छ भने केहि स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ्ग र हावाहुरीसहित वर्षाको संम्भावना छ ।